Siidoow waa aaminay Xaliimadiisii, Sawirkii ayuuna Hooyadii u soo diray. Hooyadii ayaa ku tiri: walac aaaaa, kanu fir iyo Farac Reer Siidoow male, ee Faragalin shisheeye ayaa jirto. – Damqo
1-Mr. Siidow oo qaxooti isaga dhiibay UK ayaa Mar kasta sawirada Caruurta u dhalato u soo diri jiray Hooyadii oo Somaliya joogto, waxaa u dhashay laba Wiil oo isaga aad ugu eg, Laakin sannadkii 3aad ayaa waxaa u dhashay Wiil u eg dadkii deegaanka.
Xaaskiisii ayaa ku tiri: Waxaan u maleeynayaa markii aan Walaca ahaa ayaan aad u necbaa Gaal deriskeena ahaa oo marka uu isoo ag marayo ayaan Sanka ka qabsan jiray urkiisa. Gaalkaa Naceybkii aan u qabay in aan ku walacay ayaan u maleynaa.
Siidoow waa aaminay Xaliimadiisii, Sawirkii ayuuna Hooyadii u soo diray. Hooyadii ayaa ku tiri: walac aaaaa, kanu fir iyo Farac Reer Siidoow male, ee Faragalin shisheeye ayaa jirto. ( F.S: 1aad)
( Xilka Siyaasiyiinta qaar, Rabitaan Somaliyeed kuma imaan ee ma Lacag & faragalin Shisheeyaa jirto)
2- Sheikh Reer Qoryooleey ahaa oo Muddo dheer Masjid Imaam ka ahaa ayaa Dadkii xaafaddu ka qaadeen Xilkii Imaam nimada , sheikh kale oo Reer Gaalkacyo ahaa ayeeyna u dhiibeen xilkii.
Shiikhii Cusbaa ayaa u tagay kii hore kuna yiri: ii sheeg sababta Xaafaddu kaaga qaaday Imaam nimada si aan isaga ilaaliyo . waxa uu ku yiri: Salaadda Jimcaha ayaan khudbada ku dheereeyn jiray.
Shiikhii Reer Gaalkacyoodka ahaa ayaa isaga oo is leh Sheikhii hore ku xumeey ayuu Jimcihii 1aad khudbadii ku soo koobay “ Ninkii 5ta Salaadood tukada iga waloo Jannuu galayaa , kii ka tagana Qoor iyo Xerro Naar ayuu galayaa” hana naloo Aqimo Salaadda. Dhalin yaradii ayaa aad ugu faraxday.
Jimcihii 2aad: ayuu yiri: Qisadii Nabi Nuux CS ma taqaaniin? Waxa ey yiraahdeen, Haa. Waxa uu yiri: Hadiiba aad taqaaniin ku celis looma baahna ee salaada noo aqima, Jimcaha dambena waa fasax. ( F.S: 2aad)
( Adiga oo is leh Madaxdii kaa horeysay ku xumeey, Dadku yeeyna kaa kala tagin.)
3- Gabar ayaa habeen tiri: Hooyo Ukuntii ayaa naga dhamaatay, Ukun kale ayaan Suuqa nooga soo gadayaa. Hooyadii oo shakisan ayaa ku tiri: Maandhaay intaad Ukun suuqa ka raadinee, ameey Ukun kale oo aan Suuqa laga soo gadi Karini kaa dhamaataa Adiga.( F.S: 3aad)
(Mucaarad ayaa yiri: Nidaamkaan waa u dhamaatay, mid kale ayaan ku badaleynaa. Oday Guure oo shakisan ayaa yiri: Aduunyo Gadaal u xun ee mid ka daran amaad soo wadiin)
4- Nin ayaa isaga oo Naag la joogo, waxaa Albaabka soo garaacay Ninkeedii, waxa ey ku tiri: war dharkaaga gacanta ku qaado ee deg deg Daaqadda uga bood. Waana booday, waxa uu la kulmay Dad ku jiro orodka dheer ee Maaradoonka, dhinaciisa ayuu ka orday isaga oo weli naxsan. kooxdii 1aad ayaa ku tiri: war Adiga oo qaawan miyaad orodaa. Isaga oo weli naxsan oo ismoog ayuu ku yiri: Haa, kooxdii 2aad ayaa soo gaartay oo ku tiri: war ma Adiga oo dharkaaga gacanta ku wato ayaad orodaa, waxa uu yiri: Haa, kooxdii 3aad ayaa ku tiri: war ma adiga oo Cinjirka “Condom” kuugu jiro ayaad orodaa, markaa ayuu xasuustay in uu qaawan yahay. ( F.S: 4aad)
( war xildhibaanada qaar ee Siyaasada Daaqadaha uga soo booday , oo geedi socdodkii ummadda ee ka horeyay aan la qabsan, ma is fiiriyeen, ma arkeen weli in ey Siyaasadda ka qaawanyihiin, hala yaabin Xamar waxaa joogo: Agaasime ummi ah, Janaraal Jiijiile ah, watchman wasiir noqday, Jiis leh tartanka orodka ha la ii ogolaado, Lax indhool ah oo libaax eryanee iyo….. )
5- Oday ayaa habeenkii Arooskiisa waxa uu cunay 30 Xabbo oo ah Kaniiniga Viagra, waana Geeriyooday, Subaxdii Meydiikiisa la dhaqayay ayaa dhakhtarkii yiri: Ninkaan Xubnihiisa oo dhan waa dhinteen, hal xubin ayaa weli nool, oo taagan, isaga oo qeyb ka noolna lama aasi karo ee sadax cisho qaboojiyaha halagu haayo. ( F.S: 5aad)
( Hala yaabin Hal habeen howl ah Ninkii Noloshiisa u baabiyay, waxaa jiro Nin $3 Million ku bixiyay doorasho 4 Sanno ah, si Bishiiba uu u qaato Mushaaar ah $ 3000)
6- Oday ayaa soo galay Lido Sea Food- Mogadishu, waxa uu u tagay Gabar kaligeed gooni u fadhiday, waxa uuna ku yiri: Ma lagula fadhiisan karaa?. Gabadhii ayaa qeylisay oo tiri: Aan kula seexdo aa !!!, war ma hablaha Jirkooda ka ganacsado ayaad ii maleysay? Dadkii ayaa soo wada eegay Duqii, ceeb ayuu meel gooniya la fadhiisatay, isaga oo ka naxsan beenta ey ka sheegaty.
Waqti yar kadib ayeey Gabdhii u tagtay Duqii, waxeyna si hoose ugu tiri: Iga raali ahaaw, waxaan Bartay Cilmi Nafsiga “psychology ”,waxaan rabay in aan ogaado haddii lagu dulmiyo waxa aad sameeyn laheeyd.
Odaygii ayaa istaagay oo cod dheer ku qeyliyay kuna yiri: War Annigu ma bixin karo $ 100 si aad hal habeen oo kaliya iila seexato.
Dadkii ayaa soo wada fiiriyay kuna yiri: war illeyn Run beey aheyd, sow tan haddana kursigiisii uga daba tagatay, Lacag jecelaa.
Odaygii ayaa Gabartii si hoose ugu yiri: Waxaan ahay Qareen “lawyer” bartay sharciga, waxaana aqaan sida qofku u soo ceshado xaqiisa ka maqan. ( F.S: 6aad)
( G/Sare 24 Sanno jir ah oo Bartay Cilmiga “iga booti & Bac ka sii” ayaa Kiis been ah ku soo oogay, Isbatore 60 Jir ah, tii Maxkamada ka raacday waa la ogaa.)
Previous Agaasimaha ku xigeenkii hey’adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya laanteeda Puntland ayaa goor dhaw ku geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dagaal magaalada Garowe ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan Puntland.
Next *Madaxweyne Farmaajo iyo Maalinta Oktoobar* oo ka fashilantay asagoo rabay in oo xusso Ogtobar